Ahoana ny fandokoana ny tany - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ahoana ny fandokoana ny tany
Ahoana ny fandokoana ny tany
Ahitsio: Denny　2020-01-06　Mobile
Misy karazany roa amin'ny sary amin'ny gorodona: ny iray no loko voajanahary, ary ny iray dia ny loko.
Ny loko voajanahary dia hoe tsy manao fikarakarana loko amin'ny fanodinana izy io, ary maneho marina ny toetr'ny kitay tany am-boalohany.
Misy karazany roa loko: loko marevaka sy fandokoana lalina.
Ny loko miloko dia ny hahatonga ny loko kitay ho tsara tarehy kokoa, mifototra amin'ny lokon'ny kitay dia miloko kely, toa ny hazavana maivana. Ny fandokoana toy izany dia tsy misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny gorodona mihitsy.
Tsy mitovy ny fitrandrahana maizina.Ny ankamaroan'ny gorodona misy maizina dia natao hanafenana ireo lesoka, toy ny bibikely bibikely, mihalevona, ary ny sakia.Raha mahery ny lesoka dia mila mameno menaka ny bibikely ianao, ary asio loko maizina mba handrakofana ireo nanamboatra.
Misy fiantraikany mivantana amin'ny felam-bolon-tsoratry ny gorodona izany, satria ny menaka no hanasaraka ny hazo amin'ny loko, ka tsy ho voasaron'ny hazo ny loko. Ny gorodona maizina somary maivo dia toa tena kely ary mibontsina tanteraka ireo modely. Tsy ampy ny fahatsapana ny hazo voajanahary. Ny gorodona toy izany dia mora mivezivezy amin'ny loko, ary mety ho latsaka ao an-toerana ny sasany.
Ahoana ny fandokoana ny tany Ny atiny mifandraika
Ahoana ny hanoratana ny tany
1. Izahay aloha mampiasa lamba mando mba hanadio ny gorodona hanala vovoka sy maloto.Rehefa maina ny tampon-tsofina amin'ny gorodona dia atsofazo moramora ny savoka ranon-javatra eo amin'ny tany mano...
Ahoana ny fanadiovana ny loto tanimanga
Fomba fanodinana mahazatra ho an'ny gorodona gorodona: 1. Ho fanadiovana takelaka seramika isan'andro, dia afaka mampiasa manasa, savony sns. 2. Mampiasà sabera hanampiana amoniana kely sy fangaro t...
Inona no tokony atao raha ny gorodona no vaky
Torohevitra momba ny fanamboarana gorodona: 1. Ny takelaka vita amin'ny loko dia vaky sy amboarina, ary kitapo kely no mipoitra eo amin'ny gorodon'ny gorodona. Henjana ny sarimihetsika hosodoko satri...
Ahoana no mitazona ny gorodona plastika
Ny gorodona plastika dia manana tombony azo amin'ny toekarena, maroloko, ny antibakteria, tsy sondriana, manintona feo ary mahazo aina.Mankasitrahan'ny tompon'ny haingon-trano izany, koa ahoana no fo...
Ny fomba fanadiovana ny vata gorodona ihany koa dia marevaka: toro-hevitra fanadiovana isan'andro
1. Ahoana no hamoahana disinfect ho fanamboarana ny tsenan'ny gorodona? Voalohany, amboary ny fitaovana ho an'ny otrikaretina ratsy.Manana ny zava-dehibe, misy ny sponjy, ny manondrahana ny masinina,...
US manala ny tarika, manidy ny fifandirana amin'ny patanty
Ahoana no mitazona ny gorodona volotsangana
Inona no atao hoe mampihena ny simenitra?
Inona no tokony hotandremako ny lalana amin'ny ririnina amin'ny efitrano birao PVC?
Teboka marobe no mila fifantohana amin'ny fananganana rihana PVC ririnina
Inona ny gorodona spc?
Aiza ny gorodona mainty mainty sy fotsy?
Home　|　Momba anay　|　Fanamarihana momba ny zon'ny mpamorona　|　Mifandraisa aminay
Copyright © 2008-2020 ZD Floor Expert Ltd. Zo rehetra voatokana